The 20 best events services 2019 ― DoneMaster မွနျမာ
Find the best events service
Can't determine your location. Choose from the list please.
aroma wedding center ကို 2011 ခုနှစ်မှစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာ
အခုထိဆိုရင် မင်္ဂလာဆောင်ပေးခဲ့ရတဲ့ စုံတွဲပေါင်း သောင်း ချီ ရှိနေပြီမို့ အမှတ်တရ ဖြစ်အောင် အစီအစဉ်လေးတစ်ခု ဖန်တီးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Page မှာ လူကြီးမင်းတို့အတွက်အစီအစဉ်ကောင်းလေးတွေ ကြေငြာပေးဖို့ရှ်ိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အမှတ်တရလေးတွေအတွက် အောက်က Comment Box မှာ ပုံလေးတွေရယ် မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ ရက်စွဲလေးရယ်ပို့ပေးရင်း ရင်ခုန်စရာသတင်းကောင်းလေး စောင့်မျှော်နေပါခင်ဗျာ
Chaw Su Wedding Photo Studio
၃။ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ခေါင်းပန်း
၄။ လက်ကိုင်ပန်း၊ ရင်ကပ်ပန်း
၅။ မိတ်ကပ် အပြီးအစီးကို (၃၀၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊
၁။ ကုတ်၊ ဘောင်ဘီရှည်
၂။ ဂါဝန်၊ ခေါင်းပုဝါ
၅။ မိတ်ကပ် အပြီးအစီးကို (၁၅၀၀၀၀)ကျပ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊
မိမိတို့ CHAW SU Studio မှ သတို့သား၊ သတို့သမီးလေးတို့အတွက် အသက်သာဆုံး Promotion လေးစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ အမြန်ဆုံးကြွလှမ်းလာခဲ့ကြပါတော့နော်
Dior by Heart Wedding Studio
Dior by Heart ရဲ့ one stop service pkg လေးနဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့ကြတဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံရဲ့ လိုက်ဖက်ညီ လှပကျက်သရေရှိလွန်းလှတဲ့ ပုံရိပ်လေးများကို ဝေမျှပေးရင်း All Season Promotion လေးအကြောင်းကို ကြော်ငြာပေးချင်ပါတယ်
Dior by Heart
One stop service Wedding Professionals
Always by our hearts
“ All Season Promotion for one stop service packages ”
Ruby & Ruby Flower
Silver & Silver Flower
Gold & Gold Flower
Diamond & Diamond Flower စတဲ့ One stop service pkg များကို ကြိုတင်အပ်နှံကြမည့် စုံတွဲလေးများအတွက် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် ၆လ ကြိုတင်အပ်နှံပါက အထူး Promotion အစီအစဉ်လေးများပြုလုပ်ပေးထားကြောင်းကို
Dream Creation - event planner/Kid&apos;s party Planner
သင်၏အိမ်မက် စိတ်ကူးမှပွဲများကို သင့်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ကျန်ရှိနေအောင် ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်
Elysian Floral Art & Events Planning
မင်္ဂလာဆောင် အခန်းအနား အပြင်အဆင် နှင့်ပွဲများစီစဉ်ပါတယ်
Events Planner, Special Booths, Exhibitions Services, Translations
အစည်အဝေး/ဟောပြောပွဲများနှင့် လက်တွေ့သင်တန်းတိ်ုအများအတွက် စီစဉ်ပေးချင်း
HG Wedding Planner Services
တစ်ပွဲလုံး အစမှ အဆုံး
စိတ်တိုင်းကျ အလှဆုံး စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
မင်္ဂလာမောင်နှံတိုင်း စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့ အများကြီး ကြိုးစား စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။
His&Hers Events and Wedding Studio
His & Hers မှာ Pre Wedding Photo, Actual Day Photo and Video, မင်္ဂလာ အခမ်းအနားပြင်ဆင်မှုများသာမကပဲ Wedding Planning နှင့် ပတ်သတ်တဲ့ one stop service ပါရနိုင်တာမို့လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ချစ်ဧည့်သည်များ လာရောက် စုံစမ်းပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင့်။ Package တွေအားလုံးကလည်း customize လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် မိမိ လိုအပ်သလို ရွေးချယ်လိုရတယ်နော် အသေးစိတ် စုံစမ်းချင်တဲ့ ချစ်ဧည့်သည်များ His & Hers ကို Message သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ပေးကျနော်
Island Flowers Wedding & Event Decoration
ဘဝခရီးတစ်ခုတူတူ လျောက်ဖို့ ဆိုတာ အရမ်းပျော်တဲ့ moment လေးနဲ့ စဖို့ လိုအပ်ပါတယ်... နိမိတ်အရ လည်းတသက်တာလုံးအတွက်ပျော်ရွင်မှုတွေနဲ့ အစချီဖို့ လိုအပ်သလို, ဘဝခရီးမှာ အခက်အခဲကြုံလာခဲ့ရင်လည်း အဲ့အချိန်က ပျော်ရွင်ခဲ့တာလေးတွေကိုအမှတ်ရပြီး ကြုံလာသမျှကိုရင်ဆိုင်ဖြေသိမ့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. ချစ်သူစုံတွဲ တွေအတွက် အခုလို အရာရာခက်ခဲနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ပျော်ရွင်တဲ့ အိပ်မက်တွေက်ု အလွယ်တကူ အကောင်အထည်ဖော်နိုုင်ဖို့ အတွက် IMF Finance x Ours event planning ကနေ wedding loan plan ကို စတင်launch လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီ.. စိတ်ဝင်စားရင်page မှာမေးလိုက်နော်
Linn Pyant Wedding Dress & Photo Studio
ဆယ်နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူအကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည် ..
My Wedding Dream Event Planner
My Wedding Dream ရဲ့ 2018-2019 ရာသီအတွက် All-in-one Wedding Package, Floral Package, Signing Packages များနဲ့ All-in-One Dinner Package များပါ။
မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ မောင်နှံတို့အတွက် လှည့်ကြည့်စရာ မလိုတဲ့ အပြီးအစီးဝန်ဆောင်မှုမျိုးကို My Wedding Dream မှ စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။
Package ထဲမှာ သတ်မှတိထားတဲ့ လူဦးရေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အတိုးအလျော့လုပ်ချင်ရင်လဲ လုပ်ပေးပါတယ်နော်
My Wedding Dream က ထားရှိတဲ့
"ဈေးတူလျှင် အရည်အသွေး သာရမည်။"
"ဈေးနှင့် အရည်အသွေး တူလျှင် စေတနာပိုသာရမည်"
Myanmar Event Organizer - MEO
MEO အဖွဲသည် လူကြီးမင်းတို့လိုချင်သည့် ပွဲများကိုစိတ်ကြိုက်စီစဉ်ပေးနေပါတယ် အစီးအဝေး,ပြပွဲအမျိုးမျိုး,ယာယီတဲ့များပြုလုပ်ပေးချင်း အစရှိသည့်ပွဲများကိုဖန်တီပေးနေပါပြီ ....
Myanmar Events Planner
အစည်အဝေး/ဟောပြောပွဲများနှင့် လက်တွေ့သင်တန်းတိ်ုအများအတွက် စီစဉ်ပေးချင်း အထူးယာယီ ဆိုင်ခံများကိုတည်ဆောက်ချင်
Paradise - Professional Photo & Video Services
လူတွေက သင့်ကို မေးခွန်းတစ်ခုမေးလာတယ်ဆိုပါဆို :)
· အရေးပေါအခြေအနေတွေမှာ သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲ ယူလာခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင် ဘာကိုသင်ယူမလဲ?
Photo Album တစ်ခု သို့မဟုတ် Photo တွေ သိမ်းထားတဲ့ mobile phone တစ်လုံးလုံး သို့ Computer (Sometime Hardisc Drive) လို့ဖြေမိရင် သင်မအံ့သြသွားပါနှင့်
Photos တွေက သင့်ရဲ့ ဘ၀မှာ အရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေ လူတွေ
လွမ်းဆွတ်ဖွယ် အမှတ်ရဖွယ် နေ့တွေ
ပျော်ရွင်၇တဲ့နေ့တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ သင့်ရဲ Personal Story တစ်ပုဒ်ပါ.
Photo တွေက လူတွေကို ဆက်သွယ်ပေးနေပါတယ် သတိ၇လာ၇တယ် အမှတ်၇လာ၇တယ် လွမ်းဆွတ်စေလာရပါတယ်
" သင့်ရဲ့ အမှတ်ရစ၇ာ
Peter&apos;s The Bridal Garden
Hello Dearest BG Lovers,
မင်္ဂလာပါ BG ချစ်သူများရှင့်
Rose Garden Hotel Wedding Fair 2018 ကို ယခုလာမယ့် Sep 1st and 2nd တွင် 8am to 7pm ထိကျင်းပသွားမှာပါ။
Peter’s The BG မှ 2018 ခုနှစ်အတွက်နောက်ဆုံးပါဝင်သည့် Wedding Fair ဖြစ်ပြီး Promotion Items တိုင်းကို Open Date ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာ 2019 တွင်ဈေးအပြောင်းလဲရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်အသိပေးကြေငြာလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ပွဲ၂ရက်အတွင်းလာရောက်စုံစမ်းသည့် Couples💏 များအား စိတ်ကြိုက်ကိုယ်ပိုင် Couple ၀တ်စုံတစ်စုံ ကို Outdoor အခမဲ့ရိုက်ကူးပေးသွားမဲ့ 💐FOC Outdoor
Romantic Wedding & Event Planner
မင်္ဂလာပွဲမှာ ဘယ်လိုအရောင်တွေ၊ ဘယ်လိုဒီဇိုင်းတွေနဲ့ အလှဆုံး၊ အပျော်ဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ရမလဲဆိုတဲ့သူများအတွက် Wedding Consultation Service ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို ပြီးပြည့်စုံသော အမှတ်တရပွဲလေးတွေဖန်တီးပေးဖို့ Surprise For You ကို သတိရလိုက်နော်
Together Wedding Studio - Yangon
Together Wedding Studio ရဲ့ ချစ်ရတဲ့ Customer များအတွက် package အားလုံးကို10% to 15% ထိPromotion ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ Prewedding ရိုက်မယ့်မင်္ဂလာမောင်မယ်များအတွက်လဲ လက်မလွတ်သင့်တဲ့အခွင့်ရေးလေးပါနော်။
Wedding Gown နဲ့ Evening Gown ဝယ်ယူငှားရမ်းချင်သော Customer များအတွက်လဲ 10% to15% Discount ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Prewedding Package မှာ လူဦးရေကန့်သက်ထားပါသဖြင့် ယခုပင်ဆက်သွယ်စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။
Booking ကာလမှာ (27-12-2018 မှ 31-12-2018 )ထိ (5) ရက်ထဲဖြစ်လို့မြန်မြန်လာရောက် booking ယူလိုက်ကြရအောင်။
ရိုက်ကူးပေးမယ့်ရက်လေးကတော့ (2-1-2019 မှ31-3-2019)ထိဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။
White Gallery Bridal & Wedding Studio
Prewedding ရိုက်ကူးရေး၊ ပွဲကြီးနေ့ရိုက်ကူးရေး၊ ပွဲကြီးနေ့ဝတ်စုံနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများကို ယုံယုံကြည်ကြည်အပ်နှံပေးတဲ့ အစ်ကိုနဲ့အစ်မကို White Gallery Studio အဖွဲ့သားများမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်...
YG wedding planner
အရမ်းကိုလှပတဲ့မောင်နှံနှစ်ဦး ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဂတ်လမ်းလေး ဖြောင့်ဖြူးသာယာကာ
ထာဝရ လက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ YG Wedding Planner အဖွဲ့သားများမှဆုမွန်ကောင်းတောင်း